खसीबोका आयातमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर
सरकारले मंगलबारदेखि कृषि उपजमा ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागू गरेको छ । अतिरिक्त करले खसीबोका कारोबार घटेर मासु आपूर्तिमा समस्या पर्न सक्ने तथा उपभोक्ता मूल्यसमेत बृद्धि हुने भन्दै व्यवसायीले सरकारलाई कर फिर्ताको लागि आग्रह गरेका छन् ।
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको लक्ष्य पुगेन
नेपालको मुख्य प्रवेशद्वार वीरगन्ज भन्सार कार्यालय र भर्खरै संचालनमा आएको एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ को लक्ष्य भन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ ।
निगमको घाटा २५ करोड
नेपाल आयल निगमको घाटा बढेर २५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । इन्डियन आयल कर्पाेरेशन(आईओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्य बढेर आएकाले निगमको घाटा १५ दिनमा २५ करोड पुगेको हो ।
जानीबुझी सानो बजेट
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारको आर्थिक जग बलियो बनाउन आफूले तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बजेट ल्याएको बताएका छन् । सानो आकारको बजेट ल्याएको भनेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रैबाट आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री खतिवडाले अर्को वर्ष पनि नेकपाले नै सरकार चलाउनुपर्ने भएकाले आफूले जानी बुझीकन नै महत्वाकांक्षी बजेट नल्याएको जिकिर गरे ।
सरकारले मुलुकमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन तथा व्यवस्थापन परियोजनाका लागि डोल्मा फण्ड म्यानेजमेण्टलाई २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा कूल रु पाँच अर्ब २१ करोड ३३ लाख २२ हजार राजश्व संकलन गरेको छ ।
प्रदेश नं ७ को प्रमुख नाका गड्डाचौकी स्थित कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले संकलनको दायरा बढाएसँगै राजश्व संकलनमा वृद्धि हुदै गएको छ ।
भैरहवा भन्सारद्वारा लक्ष्यको ८६ % राजस्व
नेपालकै प्रमुख भैरहवा भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५मा ७० अर्ब ८ करोड २४ लाख रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्व भन्सार बिभागले दिएको लक्ष्यको करीब ८६.०४ प्रतिशत हो ।
वर्षाको अनुकुलताले गत वर्षभन्दा १० प्रतिशतले बढी रोपाइँँ
असार अन्तिमसम्म मुलुकभर धान खेती हुने ६४ प्रतिशतमा खेतमा रोपाइँ सकिएको छ । गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यो १० प्रतिशत बढी हो ।
के-केमा लग्यो कर ?
मंगलबारदेखि करका दरहरू परिवर्तन भएका छन् । सडक निर्माण दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगायतका कर तथा गैरकरहरू साउन १ देखि लागू भएका छन् ।
लागू नहुँदै धितोपत्र बोर्डको निर्देशिका संशोधन
धितोपत्र बोर्डले लागू नहुँदै सूचीकृत संगठित संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ संशोधन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले कर्मचारी, लेखा परीक्षक, सल्लाहकार, कार्यकारी प्रमुख, बिमा सर्भेयर, बिमा दलाल, बिमा अभिकर्ता वा तेस्रो सहजकर्ता तथा एउटा कम्पनीमा कार्यरत सञ्चालक कुनै कम्पनीको अध्यक्ष वा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थासँगै धेरै मन्त्रालयका सचिव, सरकारी संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिहरू कम्पनीहरूमा अध्यक्ष वा निर्देशक रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
सार्वजनिक बिदाको दिन ४ अर्ब भुक्तानी
आर्थिक वर्षको अन्तिममा सरकारी ढुकुटीमा जिम्मेवार निकायहरूले मनोमानी खर्च गरिरहेका छन् । सार्वजनिक बिदाको दिनमै ४ अर्र्बको चेक काटेको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा मुलुकले १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिसँगै स्थानीय बजारमा खपतदर बढ्दै गएकाले यो वर्ष सो मूल्य बराबरको २७ लाख किलोलिटर इन्धन आयात भएको हो ।
ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रु चार अर्ब ६० करोड ७२ लाख ८७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।